Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Alaabta Baadhista Caafimaadka Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka > Aaladaha Baarista Caafimaadka
Aaladaha lagu baaro caafimaadka, sida magacaba ka muuqata, waa qalab ka caawiya dhakhaatiirta inay ogaadaan bukaanada ku jira rugaha bukaan socodka. Waxaa ka mid ah, qalabka caadiga ah ee lagu baadho caafimaadka: sphygmomanometer, miisaanka caafimaadka, dubbe garaaca, otoscope, stethoscope, saxanka cadaadiska carrabka iyo qalab kale oo caawiya.
Aaladaha lagu baaro caafimaadku waxay ka caawin karaan dhakhaatiirta inay si sax ah u qiimeeyaan xaaladaha bukaanka iyagoo cabbiraya cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha. Hagaajinta hufnaanta cusbitaalka oo yaree wakhtiga sugitaanka bukaanka.
Heerkulbeegga dhijitaalka ah ee afka
Waxaan bixinaa Heerkulbeegga Dijital ah ee Afka kaas oo siinaya akhris degdeg ah oo aad u sax ah heerkulka jidhka qofka. Waxa ay kulaylka la cabbiray u beddeshaa akhriska heerkulka ka muuqda LCD-ga. Marka si habboon loo isticmaalo, waxay si dhakhso ah u qiimeyn doontaa heerkulkaaga si sax ah.
Waxaan bixinaa niyad-jabka Carrabka kaas oo leh tayo sare oo leh qiime tartan ah. Waxay ka samaysan tahay alwaax alwaax ah oo ceyriin ah, dusha sare waa siman yahay oo aan lahayn bur, qaabdhismeedku waa adag yahay, ma fududa in la dhaawaco daloolka afka. Waxaa lagu jeermi jiray ethylene oxide oo aan lahayn cudur-sideyaal. Waxaa lagu samayn karaa qaabab kala duwan iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Shakhsi ahaan baakad si fudud loo qaadi karo iyo nadaafad dheeraad ah.
Deluxe Doctor's Chrome Plated Zinc Alloy Hal Head Stethoscope
Waxaanu bixinaa dhakhtarka Deluxe chrome plated zinc alloy hal madax stethoscope kaas oo ah deluxe, dhejisan. Waxay ka samaysan tahay chrome, zinc iyo alloy. Waxay leedahay miisaan fudud, madaxa auscultation, dhegta laalaada iyo tuubada Sound PVC. Way ku habboon tahay in la isticmaalo, ma fududa in la jebiyo, gabowga ka-hortagga, aan dhegdheg lahayn, cufnaanta sare, oo aanay ku jirin walxaha xasaasiyadda ka sameysan ee cinjirka ah.
Isteethoscope caafimaad oo khafiif ah
Waxaan bixinaa Stethoscope Medical Miisaanka Fudud kaas oo leh miisaan fudud, madaxa auscultation, dhegta laalaada iyo tuubada Sound PVC. Way ku habboon tahay in la isticmaalo, ma fududa in la jebiyo, gabowga ka-hortagga, aan dhegdheg lahayn, cufnaanta sare, oo aanay ku jirin walxaha xasaasiyadda ka sameysan ee cinjirka ah.
Stethoscope ee caafimaadka ee birta aan birta lahayn
Waxaan bixinaa Stainless Steel Medical Stethoscope kaas oo ka samaysan bir aan bir lahayn, leh madaxa auscultation, dhegta laalaada iyo tuubada Sound PVC. Way ku habboon tahay in la isticmaalo, ma fududa in la jebiyo, gabowga ka-hortagga, aan dhegdheg lahayn, cufnaanta sare, oo aanay ku jirin walxaha xasaasiyadda ka sameysan ee cinjirka ah.
Stethoscope ee caafimaadka wadnaha
Waxaan bixinaa Wadnaha Cilad-sheegidda Caafimaadka Stethoscope kaas oo leh madaxa dhegta, dhegta laalaada iyo tuubada Sound PVC. Ma fududa in la jebiyo, gabowga lidka ku ah, aan dhegdheg lahayn, cufnaanta sare, oo kuma jiraan walxo xajiin ah oo latex ah.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Aaladaha Baarista Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Aaladaha Baarista Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Aaladaha Baarista Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.